I-155-pounds uTess Holliday yashicilela isithombe ngaphandle kwelineni
I-Nestle ngokupheleleyo kwiyodwa yezona ziqhamo ezidumileyo kunye nobukhulu emhlabeni jikelele uTess Holliday akuyona ingxaki. Ngenye imini, kwakukho ithuba elifanelekileyo le-Day Day, egujwa minyaka yonke e-USA iminyaka engaphezu kwamashumi amane.
Lo nyaka, uTess Holliday oneminyaka engama-32 ubudala wanquma ukujoyina umkhosi weNudist Day. Umzekelo, ubunzima bawo buye bugqithiselwa uphawu lwama-kilogramgram eyi-155 kilogram kunye nokuphakama kwama-cmentimitha angama-160, lubeke kwi-Instagram frame, apho luhamba khona ngokuzeleyo. Ngaphansi kwesigcaziso esinesibindi, imodeli yombhalo ibhalile:
"Bakuzondayo, kuba abakho."
U-Tess Holliday ubonakaliswe ngokupheleleyo kwi-Instagram
Ukunyanzeliswa kokuncinci kusekhona kwisithombeni, apho elele khona ecaleni lakhe ebhedeni elimhlophe, ebonisa amanqaku akhe amaninzi. Ngomncedisi wezithombe umhleli uTess wavala iingxenyana ezithandana zomzimba wakhe, ngaphandle koko isakhelo siphula imithetho yemisetyenzana yentlalo kwaye iya kususwa ngokukhawuleza ngabaomodareyitha.
Nangona u-Holliday, onomama onomdla wabantwana ababini, ulinganisa ngokuphindwe kathathu ngaphezu kweentombazana eziqhelekileyo, akazinqikazi iifomu zakhe zokunisela umlomo. Abaxhasi be-biopositive bajonga uTess isithixo sabo kunye nokubonga ngokuphefumlelwa kunye nomzekelo. Kwakungekho zikhundla ezingenanto malunga nomzekelo, kodwa zalahleka ekunconyweni ukuba i-tape yakhe igcwele.
U-Tess noNick Halliday kunye nomntwana wabo oqhelekileyo uBuyie
Kunobungozi kakhulu: U-Ashley Graham ugqoke iingubo ezimfutshane ze-latex
U-Ashley Graham uyaqhubeka emangalisa abalandeli abanemifanekiso ngaphandle kokubuyisela
Umfanekiso wosuku: u-Amal Clooney ephezulu ebomvu ngesitya
Ngendlela, Usuku lweNtshonalanga lwaphawulwa ngomnye umzekelo onobubanzi obuninzi kunye no-Ashley Graham, 29, wabelana nababhalisile ukuba badutshulwa emnyama kunye nomhlophe, apho umama wakhe wazala khona.
Udokotela uHugh Grant kungekudala uza kuba nguyise ... okwesine!
UMichel Mercier noRobber Hossein
Isiphumo sokuqala ezintandathu ezintandathu: U-Taylor Swift watshata nomhlobo wabantwana
UMadonna unokuthabatha enye inyana
ULloyd Klein waxolelana nekatikazikazikazi uJoseph Wildenstein
UKylie Jenner waqashisa ikhaya lezoluka eMami kwaye wenza iifoto ezifanelekileyo kwi-swimsuit
UMilos Bikovich udibana ne-supermodel uSasha Luss
Intamo ibonakaliswe i-GQ Italia
Iingubo zeHalloween "uKim Kardashian ngexesha lophangi" kwakufuneka zisuswe ekuthengiseni
Uphando lokuxhaphazwa kwabantwana uBrad Pitt wagqiba
U-Beyonce waqhawula u-ovation omileyo, ecula ngesiteji
UStella McCartney: iteknoloji yezobugcisa kunye nokuphakanyiswa kwezinto eziphilayo emhlabeni!
UMonica Lewinsky ucaphukise ifilimu entsha ngokuphathelele uxhamano lwakhe noBill Clinton
Nina Dobrev kunye neVin Diesel
EMauritius - ezikhangayo
Indawo yokulala, iileyile - uyilo
I-tincture ye-pine cones kwi-vodka - isicelo
Ukukhupha iipenties ezinomlenze ophezulu
Iipatties ngobisi olunomso
Ungasusa njani iintlobo ze-nasolabial?
Musani u-Chanel omnye: yiziphi iifumba ezikhethiweyo ezikhethiweyo uphawu lwesimboli yekhulu lemashumi mabini?
AmaBanga amathiphu amnandi
Intetho yakhe uK Kanye West yanqoba iintliziyo zezigidi
Imihlobiso - imiyalezo emangalisayo
Ugqoke usuku lwesibini lomtshato
Isaladi nge yoghurt
Iingubo ezibomvu zabafazi abatshatileyo
Uyilo lwangaphakathi kwisitayela seProvence